अनि मैले त बाइक पो ल्याएँ ! कमेडी भिडियो – tvNepali.net
अनि मैले त बाइक पो ल्याएँ ! कमेडी भिडियो
अनि मैले त बाइक पो ल्याएँ । यो कमेडी भिडियोको शिर्षक हो ।
यहाँ प्रस्तुत गरिएको भिडियो टिभीनेपाली फेसबुक पेजमा तपाईले देखिसकेको हुन पर्छ । किनकि यस्ता धेरै रमाइला भिडियोहरु टिभीनेपालीको अफिसियल पेजमा अपलोड हुने गर्छन् । तपाईले लाइक गर्नु भएको छैन भने पेज लाइक गरेर यस्ता रमाइला भिडियोहरु आफ्नो फेसबुकमा आउँने बनाउँन सक्नु हुनेछ ।
यो त भयो टिभीनेपालीको बारेमा । यो भिडियोमा चै त्यस्तो के छ त ? भिडियोमा एकजना युवकले आफुसँग घटेको घटनाको बारेमा आफ्नो साथीलाई सुनाउँदै हुन्छ । यो घटना सुनाउँनुको कारण चै फेरि झन् रोचक छ ।
वास्तवमा यो सर्ट मुभीको मुख्य पात्रसँग अघिल्लो दिनसम्म बाइक हुदैन तर भोलीपल्ट एक्कासी बाइक चढेर स्टाइलमा हिड्न थाल्छ । यो देखेर उसको साथीले बोलाउँछ । र उसलाई भन्छ कि हिजोसम्म नभएको बाइक आज कसरी आयो ? कसको बाइक लिएर यसरी फुर्तिसाथ हिड्दैछस् ?
तब बाइकवाला साथीले आफुसँग घटेको रोचक घटना सुनाएको हुन्छ । उसको घटना निकै रोचक हुन्छ ।
उ जंगल छेउको बाटो हिड्दै हुन्छ । त्यहि बाटोमा एक जना युवती बाइकमा आउँछिन् । एकान्त ठाउँमा कोही पनि नदेखे पछि ति युवतीले युवकलाई आफ्नो बाइकमा बसे पुर्याइदिने आशा देखाउँछिन् । बाटो छिट्टै कट्छ भनेर युवक पनि बाइकमा बस्छ ।
तर घटना तब मोडिन्छ जब युवतीले बाटो मोड्दै बाइकलाई सुनसान र एकान्त जंगलमा पुर्याउँछिन् । त्यसपछि के के हुन्छ र युवकले कसरी युवतीको बाइक हात पार्छ भन्ने जान्न चै तपाईले भिडियो नै हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
PreviousPrevious post:सामान्य विवादको क्रममा श्रीमानले लठ्ठी प्रहार गर्दा श्रीमतीकोे मृत्यु
Next Next post:हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना नेपाली जनताकै लगानीमा बन्ने भयो